Mitady olo-tsotra ny Tompo – Tsodrano
Ny teny ho dinihina dia mitondra antsika hijery manokana ny tetiarana sy ray aman-drenin’i Jesosy ara-nofo, dia Josefa sy Maria. Tsy vitsy no miheritreritra fa tsy ilaina loatra ny andininy voalohany ka hatramin’ny faha-17 izay mitantara ireo razam-ben’i Jesosy ara-nofo. Heverina anefa fa nilain’Andriamanitra ny fisin’ireo voatonotona ireo mba ho fiasana nahatonga ny zanany ho eto amin’izao tontolo izao. Izany dia tahaka ny nilana an’i Josefa sy Maria.
Raha miresaka an’i Josefa sy Maria isika dia mazàna Josefa sy Maria hafa no fantatsika. Tavela ao an-tsaina ny hoe : Fa ny zaza izay haterany dia avy amin’ny Fanahy Masina. Mbola hiverenatsika ny momba izany fa andeha aloha ho jeretsika fa i Maria sy Josefa dia mitovitovy amin’ny fiainatsika olombelona.